Izindaba - Umshini wokuzenzakalela weSandblast weMabble blasting, ingilazi, ipuleti lensimbi, ipuleti lensimbi
Lolu chungechunge lomshini wendiza yokudlulisela othomathikhi uhlobo lomshini we-sandblasting, isivinini sokudlulisa sikhona ukuguqulwa kwemvamisa ukulawulwa kwedijithali
Ijubane le-Sandblasting, ikhwalithi yokucubungula izinzile, ukusebenza okulula.
2. Beka i-workpiece ebhande lokuhambisa ngesikhathi sokusebenza, futhi ukusebenza kwe-sandblasting kuqedelwa ngokuzenzakalela, okulula kakhulu futhi okulula kakhulu.
3 Futha isibhamu jika radian kungase kushintshwe usayizi.
I-4 Spray gun ne-spray gun rack, ingafakwa ngosayizi we-workpiece, futhi ingenza ukujikeleza okungu-720 degrees, ukuze zonke izinhlobo zokucubungula i-workpiece sandblasting.
5.Equipped nge enkulu uthuli ukususwa umshini futhi abrasive futhi uthuli isiphepho isihlukanisi, angahlukanisa olwalwenza futhi uthuli, kunganciphisa ukusetshenziswa olwalwenza, ukungcoliswa kwemvelo. Ama-Abrasives angavuselelwa kabusha ngokuzenzakalela.
6 Lo mshini wochungechunge unamaqembu ama-2-10 wezibhamu zokufafaza, isibhamu ngasinye sokufafaza sinokulawula okuhlukile, kuhlonyiswe ngezibhamu ezihlanzekile ezi-2-12, kunganciphisa ukucutshungulwa komsebenzi osebenza ngesihlabathi.
7 Ngokuya ngosayizi wamakhasimende womsebenzi wekhasimende, ukuma kwawo kanye nokukhishwa kwawo nokuklanywa kwawo kulungele lo mkhiqizo womshini okhethekile, lo mshini unganikezwa nemishini yokuqoqa uthuli olumanzi ngokuya ngesidingo somsebenzi wekhasimende.
Umshini wonke usebenzisa i-Siemens PLC ukulawula okuhlanganisiwe, ukusebenza okulula nokulula.
Ukususwa kothuli kusetshenziswa i-pulse othomathikhi yokususa uthuli, ngezakhi zokuhlunga ezithuthukisiwe eziyi-9-16, kuhlangabezana ngokuphelele nezidingo zokuvikelwa kwemvelo.
Ukusetshenziswa kwezinto zesihlabathi: i-alumina sand (i-corundum sand), i-silicon carbide (i-green silicon carbide, i-black silicon carbide)
ingilazi yobuhlalu, i-walnut silicon, isihlabathi se-resin, izinhlayiya zepulasitiki (isihlabathi senayiloni), ubuhlalu be-ceramic, ubuhlalu bensimbi, isihlabathi sensimbi, ubuhlalu bensimbi engagqwali, ubuhlalu be-aluminium, njll.
I-11.USES: ifanele ithayela le-ceramic, imabula, ingilazi, ipuleti lensimbi, ipuleti lensimbi, ipuleti le-aluminium, iphrofayli ye-aluminium, igobolondo lesikhungo sekhompiyutha, isigaxa segobolondo lekhompyutha, itshe, njll.